Ulwazi olunolwazi kubo bonke abantu - ngubani ofuna ukwazi kwaye ufuna ukwazi!
Uhlalutyo lwamaStlisti yombhalo. Umzekelo wohlalutyo lwesitellisi lwezobugcisa, izenzululwazi okanye izitishi zomntu
ezaposwa ngomhla 20.04.2019
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zesitayela sesiRashiya, phakathi kwazo-i-colloquial, ishishini elisemthethweni, ubugcisa. Kukho iindlela ezimbini ezibhaliweyo. Ezi zenzululwazi kunye neendlela zengxelo. Ukwenza ngokucacileyo iingcinga zakho, kubalulekile ukuba ukwazi ukukhetha ...
Umnyango wehlabathi jikelele kufuphi nemoto: ukufakwa nokulungiswa
Imisebenzi ephambili umnyango wemoto esondeleyo ekujoliswe ukuba uyenze awuyikukhuphela kuphela ukukhusela umnyango ukuba ungonakaliswe ukuba asebenze xa avulwa okanye avaliwe. Iindlela zanamhlanje zibaluleke kakhulu ...
Ukunyamekela imithi ye-apula ekwindla: iingongoma ezibalulekileyo
Imithi ye-Apple ivakalelwa kakhulu kwilizwe lethu kwaye ayifuni ukudala iimeko ezikhethekileyo zokuvalelwa. Kodwa bafuna ukunakekelwa kunye nokuqwalaselwa. Kubaluleke kakhulu ukulungiselela ngokufanelekileyo umyezo wezityalo ...
I-Institute of Pulmonology ikuphi na? Ulwazi kunye nokuhlaziywa
I-Diagnostics kunye unyango lwezifo zokuphefumula zihlala kumaziko amakhulu emipompo. Iingcali zichonga kwaye zonyango: i-asthma ye-bronchial; i-bronchitis emphysema; pneumonia; urticaria kunye nezinye izifo. Iingcali ezigqwesileyo ezifanelekileyo zisebenza kwiziko leplmon, ...
Ukuhlaziywa kweminyaka ngokwe-D. B. Elkonin
Kwiengqondo zanamhlanje, ukuba umntu osebenza kwinkqubo yakhe yophuhliso kunye nokwakhiwa kwakhe kuhamba uchungechunge lwezigaba ezahlukileyo komnye kumanqanaba: umzimba awusekho mfihlelo; ngengqondo; ...
Amaconsi "Susa-Vaks": ukuphononongwa, imiyalelo, ukusetyenziswa kwabantwana, izifaniso zeziyobisi
Ukuvakalelwa kweentlungu kwiindlebe kunika ubunzima obuninzi kumntu omdala, ungakhankanyi abantwana abancinci, abangazange bafunde ukuthetha. Ngemibonakalo efanayo yekliniki, abazali abaxhalabileyo bangena kwi ...
"Inzulu" - izifundo zesiNgesi. Ukuphonononga ngezifundo zesiNgesi "ezinzulu" eMoscow naseSt. Petersburg
Ulwazi lolimi lwesiNgesi kwihlabathi lanamhlanje ligalelo elixabisekileyo ekuphuhlisweni koluntu lonke, kunye noluntu. Ukuba ufuna ukufunda ulwimi olungaphandle, ngoko ...
Ukunyanzelisa ... Iindlela kunye nezindlela zengqondo yempembelelo kumntu. S. G. Kara-Murza, "Ukunyanzeliswa kwengqondo"
Kwenzeka njani ukuba abantu bathonywe? Namhlanje bahlala ngaphandle kokukrokra nantoni na, kwaye ngomso bangabhala kwakhona indlu eyodwa ukuya kwelinye ilizwe. Ngokuqhelekileyo phantsi kwefuthe lento ethile ...
Indlela yokuphelisa intlungu kunye nobunzima entloko
Intloko kunye nokukhulula entloko ziyazi kakuhle, mhlawumbi, kumntu omdala. Esi sibonakaliso esifanelekileyo sezifo ezininzi: ukusuka kwisifo esibandayo ukuya ekuphuleni okukhulu kwengqondo. Ewe, inzwa engathandekiyo ...
I-Sretenskaya ikhandlela. Umthandazo wokunikezelwa kwamakhandlela kaSretensky
Ihlabathi le-Orthodox libhiyozela i-15 ngoFebruwari, umthendeleko weNtetho yeNkosi. Ingcwaliswe kulolu suku, amanzi namakhandlela bafumana iimpawu ezikhethekileyo. Banceda imithandazo yethu ukufumana amandla enomdla anika inkxaso ekuguquleni ...
Iipilisi "iProtekta": imiyalelo yokusetyenziswa, iifaneli, ukuhlaziywa
Ngamaxesha anamhlanje, umntu unako ukuva izikhalazo ezivela kubantu abalupheleyo kuphela malunga nendlela amajoyina abo aphendulwa ngayo kwimozulu. Izifo zamalungu amanamhlanje asinayo imida. E mngciphekweni ...
Yurophu neAsia. Liliphi ilwandle edibanisa neMarble Strait yaseBosphorus?
Umda womhlaba we-Yurophu ne-Asia udlula kwiintaba, ii-Urals kunye neCaucasus, nolwandle-ngamanzi amaninzi amanxweme kunye ne-Bosphorus Strait. Luhlobo luni lwamanzi oludibanisa ne-Bosphorus Marble Strait, ...
Intlanganiso yomzali weHlangano kwiklasi ye-7. Indlela yokubamba intlanganiso kwiklasi ye-7
Ingxaki enkulu kubafundisi abaninzi iba yintlanganiso yomzali kwiklasi ye-7. Into kukuba eli xesha libaluleke kakhulu kubafundi, ootitshala, kunye noomama-baba.
Izibhathane ezimbini: amaxabiso, ubukhulu kunye namacebiso okukhetha. Umbhede ombini kunye nomathathu
Ukulala kubalulekile ebomini bethu. Indawo yokulala ehlelwe kakuhle ikunceda ukuphumla ngokuqhelekileyo. Ewe, ukuba unobhedi obuphezulu obunomgangatho obunamathebhu. Kwaye unemiphunga yomzimba. Ukuba ...
Inkqubo yomsebenzi weqela lezemidlalo kwi-GEF esikolweni nasezikhunjini
Kwi-pedagogy yanamhlanje, ukuqhelaniswa kobugcisa beeklasi kuya kutshintshwa ngokunyanisekileyo ngolu phuhliso. Ngaloo nto sifanele senze kuqala oko kuthetha ukuba kungekhona nje kuphela izazi zengqondo ngokwazo, kodwa nokufundisa ootitshala baqala ukuqonda nokubona okwenene ...
Konstantin Vorobev, umbhali. Iincwadi ezintle ze Konstantin Vorobyev
Omnye wabameli abaqhakazileyo be-"lieutenant" prose, uKonstantin Vorobev wazalelwa kwisibingelelo esithi "nightingale" saseKursk, kwidolophana ekude ebizwa ngokuthi yiNizhny Reutets, kwisixeko saseMedvedinsky. Indalo ngokwayo ikhona khona ...
URobert Kardashian: umvelaphi, i-biography kunye nosapho
Intsapho yaseKardashian namhlanje iyaziwa malunga nabemi baseUnited States ngenxa yeyona nto ibonakaliswe ngayo igama elifanayo, eliye "kwi-E!" Isiteshi seTV ngaphezu kweminyaka eyi-7 kwaye ibetha zonke iirekhodi zokuhlola. Nangona kunjalo, idume ...
Umnqamlezo: "Osinka" - iklabhu yeenaliti
Kungekudala, i-needlework ibuye ifakeke kwakhona! Abafazi baqhawula, baqeshwe, baqhawula, batyula ... Ukuphucula izakhono, ukwabelana nge "boaster" okanye ukucela iingcebiso, ukuya kwiindawo ezizodwa. Makhe sithethe ngokuthandwayo ...
"Ivanhoe" yeshashalazi: i-repertoire, abaculi, indlela yokufumana ngayo
Inkampani ye-Ivanhoe Theatre yadalwa nje nge-4 ngonyaka odlulileyo. Ngeli xesha, imimculo emibili ye-grandiose yabantwana yaboniswa: "I-Ballad yenhliziyo encinci" kunye ne "Isiqithi seNcwane", esithandwa kakhulu ...
UAsus X553MA: ukuphononongwa. Iintsilelo kunye neenzuzo zekhompyutheni
Inkampani uAsus akayekanga ukuphazamisa abalandeli bayo - okokuqala isixhobo esithintekayo kunazo zonke emhlabeni, ngoko-transformer-transformer kwaye ngoku i-laptop kwi-Asus X553MA. Ukuphononongwa kwabanikazi bale divayisi ...
Page 1 Page 2 ... Page 9 700 Okulandelayo Page
© Copyright 2017 - 2019 Ulwazi olunolwazi kubo bonke abantu